जनअन्दोलन २०४६ को सम्झनामा : म, धन्न सहीद भएनछु ! « Gajureal
जनअन्दोलन २०४६ को सम्झनामा : म, धन्न सहीद भएनछु !
प्रकाशित मिति: २६ चैत्र २०७६, बुधबार १४:१३
‘सामाजिक परिवर्तनन र जनताको मुक्तिकालागि’ चर्को स्वरमा नारा भट्याउँदै शहर परिक्रमा गर्दा उत्शाहले जोश पलाउनु, होस हराउनु, बेहोस हुनु सबै स्वीकार्य हुँदो रहेछ । तर, आन्दोलन तताउँन माहौलमा होमिन जोस्याउनेहरु आफुचाहीँ कतिसम्म होसियार हुन्छन् भन्ने कुरा कमैलाई थाहा हुन्छ ।
‘नभागौं साथी हो नभागौँ !’ भनेर उत्तेजित बनाउनेहरु सबैभन्दा पहिला भाग्छन् । यो कुरा थाहा नपाउने सोझा जनताहरु माथी दमन गरिन्छ, लाठी र गोली बर्साइन्छ । परिणाम स्वरुप निहत्थाले गोली खान्छन्,। थाहै नपाई सहीद बन्छन् !
सहिद हुनेलाई यो कुरा थाहा हुँदैन – ‘मृत्युपछी म सहीद हुन्छु, फोटोमा सजिन्छु,चर्चामा चुलिन्छु, समय बित्दै जाँदा खोपीमा हुलिन्छु । कहिलेकाँही सम्झिईन्छु, धेरै चाँही भुलिन्छु । पानामा लेखिन्छु, स्टोरमा फ्याँकिन्छु । सहीदरुपी भर्याङमा खुट्किलो थपिन्छु । नेताकै पैताला मज्जाले टेकिन्छु ! आदी
यतिमात्र कहाँ हो र ! सहीद कोटा र कोटीमा बाँडिन्छन्, अग्ला र होचामा दाँजिन्छन् । उसका र मेरामा, घर र डेरामा ठेलिन्छन्, तानिन्छन् । समय बद्लिदा पुराना सहीद, नयाँ सहीद, गोली थापेका र गोली ताकेका सहीद, बिना पैसाका सहीद, लाखका सहीद, दश लाखका सहीद, मोलतोलका सहीद, बोलकबोलका सहीद बनाइन्छ भन्ने पनि सहीदलाई पत्तै हुँदैन ।
सहीद हुँनबाट जोगिएका, घाइते भएर रोघिएकाहरु ऐले भन्दैछन् -‘धन्न सहीद भएनछु !’ नत्र यत्रो बितण्डा देख्ने रहेनछु । त्यो गोली छातीमै ठोक्किएको भए, तिघ्रा र पिंडुलामा नरोकिएको भए म पनि सहीद हुँने रहेछु ।
सहीद भएको भए अहंकारको भुँग्रोमा ठेलिने रहेछु । शक्तिको बलमा पेलिने रहेछु । मोलतोलमा किनेने र बेचिने रहेछु । सहीदरुपी भर्याङमा एउटा खुड्किलो थपिने रहेछु ! शक्तिशाली पैतालाले बारबार टेकिने रहेछु । अहिले पो बल्ल बुझें, सहीद केवल सत्तारोहणको अस्थायी भर्याङ मात्र बनाइदो रहेछ ! म झलझली देख्छु, टुलुटुलु हेर्छु ! मनमनै भन्ने गर्छु धन्न म सहीद भएनछु !